မြန်မာ-ထိုင်း မယ်ဆိုင်ချောင်း ရေသုံးစွဲရေး သဘောတူညီချက်အရ ထိုင်းနိုင်ငံဘက်မှ ယာယီ ဝါးရေတာ?? - Yangon Media Group
တာချီလိတ်၊ ဇန်နဝါရီ ၁ဝ
ထိုင်းနိုင်ငံတောင်သူများ စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းများတွင် အဆင်ပြေချောမွေ့ စေရန်ရည်ရွယ်၍ မြန်မာ-ထိုင်းနယ်စပ်ရှိ မယ်ဆိုင်-မယ်ဟောက် ချောင်းရေခွဲဝေအသုံးချရေးနှင့် မြစ်ကြောင်းထိန်းသိမ်းရေးဆိုင်ရာ ပူးတွဲကော်မတီ(ထိုင်း)ဘက်က ဇန်နဝါရီ ၉ ရက်မှ မေလအထိ မယ်ဆိုင်ချောင်းအတွင်း ယာယီဝါးရေ တားများပြုလုပ်မည်ဖြစ်ကြောင်း မဲဆိုင်-မဲဟောက်ချောင်းရေခွဲဝေ အသုံးချရေးနှင့်မြစ်ကြောင်းထိန်း သိမ်းရေးဆိုင်ရာ ဆပ်ကော်မတီမှသိရသည်။
အဆိုပါမယ်ဆိုင်ချောင်းအတွင်း ယာယီဝါးရေတားများပြုလုပ်ရာတွင် တာချီလိတ်မြို့နယ်လမ်း ဦးစီးဌာနမှ ဦးစီးအရာရှိ(မြို့ပြ) ဦးမြင့်ဇော်၊ ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်ရေးဦးစီးဌာနမှ အငယ်တန်းအင်ဂျင်နီယာ(၂)ဦးရန်နိုင် အောင်၊ မြို့နယ်အထွေထွေအုပ် ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနမှ ဒုတိယဦးစီးမှူး ဦးမျိုးဇော်တို့ ပါဝင်သောအဖွဲ့ မှ အနီးကပ်သွားရောက်ကြီးကြပ် ဆောင်ရွက်ပေးခဲ့ပြီး မယ်ဆိုင် ချောင်းအတွင်း ထိုင်းဘက်ကမ်းမှ မြန်မာဘက်သို့ ပေ ၃ဝ ခန့်ဝါးတုတ်ရိုက်ခြင်း၊ မြန်မာဘက်မှ ထိုင်း ဘက်ကမ်းသို့ပေ ၂ဝ ခန့်ဝါးတုတ် ရိုက်ခြင်းလုပ်ငန်းများကို ဆောင်ရွက်ခဲ့ကြသည်။
၁၉၉၁ ခုနှစ်က မြန်မာနိုင်ငံနှင့် ထိုင်းနိုင်ငံ မယ်ဆိုင်-မယ် ဟောက်ချောင်းနယ်နိမိတ်ကို ကော်မတီနယ်နိမိတ်အဖြစ် တိုင်းတာချမှတ်ခြင်းဆိုင်ရာစာချုပ်အရ မယ်ဆိုင်- မယ်ဟောက်ချောင်းရေ ကို သာတူညီမျှအသုံးပြုခြင်း၊ ရေ စီးကြောင်းကို မပြောင်းလဲဘဲနှင့် ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်မှုလုပ်ငန်းကို နှစ်ပြည်ထောင်အကျိုးအတွက် ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ရန်၊ စိုက်ပျိုးရာသီ ဇန်နဝါရီလနှင့်မေလအထိ ချောင်း ရေမျှဝေသုံးစွဲမှုကို ဝါးတားတမံများနှင့် စနစ်တကျ ဒီဇိုင်းအတိုင်း ဆောင်ရွက်ရန်၊ စိုက်ပျိုးရာသီကုန်သွားသည့်အချိန်တွင် ချောင်းအတွင်းရှိ ရေတားတမံများကို မူလ ချောင်းအနေအထားအတိုင်း ထိုင်းဘက်က ပြန်လည်ပြုပြင်ပေးရန်တို့ ကို ညှိနှိုင်းသဘောတူခဲ့ကြကြောင်း မဲဆိုင်-မယ်ဟောက်ချောင်းရေခွဲ ဝေအသုံးချရေးနှင့်မြစ်ကြောင်း ထိန်းသိမ်းရေးဆိုင်ရာဆပ်ကော်မတီမှ သိရသည်။
နှစ်နိုင်ငံ သဘောတူညီချက်အရ တာချီလိတ်မြို့၊ ရန်အောင် မြေရပ်ကွက်ရှိ ငှက်ပျောဆိပ်၊ ဆန်ဆိုင်း(က)ရပ်ကွက်ရှိ ဂရင်းဆိပ်နှင့် ပုန်းထွန်ရပ်ကွက်ရှိ ဝါးဆိပ်သုံးနေရာရှိ အတားအဆီးအ ဟောင်းများအား ၂ဝ၁၇ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလအတွင်းဖယ်ရှားခဲ့ပြီး ငှက်ပျောဆိပ်နှင့် ဂရင်းဆိပ်နှစ်နေရာတို့တွင် ၂ဝ၁၈ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီ ၁ ရက်မှ မေ ၃၁ ရက်အတွင်း ယာယီဝါးတားတမံပြုလုပ်ဆောင်ရွက်ကာ ဇွန်လပထမပတ်အတွင်း ပြန်လည်ဖယ်ရှားပေးရန် နှစ်နိုင်ငံ တာဝန်ရှိသူများက နိုဝင်ဘာ ၈ ရက်တွင် သဘောတူလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ကြကြောင်း သိရသည်။
ဧရာဝတီမြစ် အတွင်း ဒဏ်ရာဖြင့် မျောပါလာသည့် လင်းပိုင် အထီးတစ်ကောင်ကို ကသာမြို့ အောင်ချမ်းသာ?
မကွေး၊ ရခိုင်နှင့် ချင်းဒေသထွက် အငယ်စား၊ အသေးစားနှင့် အလတ်စား ဒေသထွက် ကုန်ပစ္စည်းများ ပြပွဲ